Race Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड दौड
मेरो हृदय भारी छ. मलाई थाहा परमेश्वरको राम्रो छ, र उहाँले नियन्त्रणमा भन्ने, तर मेरो हृदय भारी छ.
फर्ग्यूसन मा भएको घटना पछि गत हप्ता (र सामाजिक मिडियामा यसलाई प्रतिक्रियाहरू), म एउटा गीत लेख्न बोझ महसुस. मेरो लक्ष्य कुनै पनि महान् बयान वा घोषणाहरूमा बनाउन थिएन, तर सबै कुरा मलाई महसुस गरे भनेर बाटो व्यक्त गर्न. त्यसैले म लेख्दै सुरु, र यो बाहिर आए के छ. मेरो मनमा दोहोऱ्याउनुभयो को भावना थियो: "यो मलाई भएको छु सकिएन।"
म मसीहीहरूले यस्ता समयमा प्रतिक्रिया कसरी एक सम्पूर्ण पोस्ट तयार भएको थियो, तर हिजो एरिक गार्नर बारेमा समाचार पछि, म पछि प्रतीक्षा र पोस्ट निर्णय. अहिलेको लागी, म सिर्फ म एक भारी हृदय छ कि भन्न चाहनुहुन्छ. म अहिले बहस वा तर्क छैन रुचि छु. मैले मेरा चोट व्यक्त गर्न स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ.
कि एरिक गार्नर भिडियो हेर्न तहसनहस छ किनभने म चोट छु. जब पहिलो मेरी श्रीमती र म यसलाई महिना पहिले हेर्नुभयो, हामी दुवै कराए. जीवन एक सुन्दर उपहार हो, र यो विचारणीय छ कि जीवन कसैको शरीर छोडेर हेर्न - यो अन्य मानिसहरूले लिएको गर्नुपर्छ विशेष गरी जब. मैले सोचें, “Surely people can’t get away with…
म सुरुदेखि Trayvon मार्टिन सागा संग राखिएको गर्नुभएको. तपाईं को धेरै जस्तै म हेर्नुभयो समाचार कभरेज, यो लेख पढ्न, र साथीहरूसँग यो बारेमा कुरा. यो सार्वजनिक कुराकानी प्रभुत्व र अमेरिका मा दौड बारेमा धेरै आवश्यक छलफल सुनेपछि. नस्लवाद तितो वास्तविकता हाम्रो अनुहार अगाडि धक्का थियो, र पनि गर्ने रुचि ती बहाना यो अवस्थित छैन यसको बारेमा कुरा गर्न बाध्य भए.
भन्दा एक वर्ष पछि, Trayvon गरेको हत्यारा प्रयास र दोषी फेला परेन गरिएको छ. मतलब हामी विवादहरू देखि मा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ? तिनीहरूले तिनलाई निर्दोष फेला, त्यसैले यी "दौड मुद्दाहरू” हामी लाग्यो वास्तविक रूपमा हुनु हुँदैन तिनीहरूले थिए, ठिक? त्यो सत्य देखि थप हुन सकेन. म तथ्य बारे बहस को कुनै इरादा, Trayvon चरित्र, वा यो दुःखद अवस्था मा जूरीको फैसला, तर मलाई लाग्छ केही चर्चा जारी गर्नुपर्छ के. परीक्षण माथि छ, तर कुराकानी हुनु हुँदैन.
मलाई थाहा धेरै यस विशेष परीक्षण किन यति धेरै को ध्यान कब्जा गरेको छ जो आश्चर्य हो. केही कालो मान्छे किन यति Trayvon मार्टिन समानुभूति देखाउन छिटो अन्यको आश्चर्य, तथ्यलाई बावजुद उसले आफ्नो को मुद्दाहरू थियो. जे भएपनि,…